JOOX အသုံးပြုသူများအတွက် JOOX အက်ပလီကေးရှင်းတွင် Check In ပြုလုပ်ရုံဖြင့် ဆုလက်ဆောင်များရရှိမည့် အစီအစဉ် စတင် – MyTech Myanmar
ဆုလက်ဆောင်များတွင် iPhone 11၊ ငွေသားများနှင့် ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်များပါပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့အထိ နေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေပန်းစားလူကြိုက်များလျက်ရှိသော အင်တာနက်မှ သီချင်းနားထောင်နိုင်သည့် JOOX အက်ပလီကေးရှင်းမှ လက်ရှိတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆုလက်ဆောင်များ ကံစမ်းရရှိနိုင်မည့် အစီအစဉ်ကို စတင်ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံမျှဖြင့် ဆုမဲများ ပိုမိုရယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေးများကို ဖန်တီးပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ “Check In Every Day and Win the Lucky Draw” အစီအစဉ်တွင် JOOX Member အားလုံးမှ အက်ပလီကေးရှင်းထဲတွင်ရှိသော “Check In” Icon ကို နှိပ်၍ ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကံထူးသူများကို JOOX အက်ပလီကေးရှင်းရှိ Pop-up မက်ဆေ့ချ်ဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆုကံစမ်းမဲ ရရှိသူများသည် JOOX Myanmar Facebook Page Chat Box သို့ တိုက်ရိုက်လာရောက်ဆက်သွယ်ပြီး ထုတ်ယူနိုင်သည်။
1. iPhone 11 (128GB)
2. ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
3. ၃၀,၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်
4. ၁၀,၀၀၀ တန်ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်
5. VIP အခွင့်အရေးနှင့် Coins များ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
JOOX အသုံးပြုသူ Member တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီမှ နေ့စဉ်တစ်ကြိမ်စီ ဝင်ရောက်ပြီး Check In လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကာ ပြုလုပ်ရသည်မှာ ထိုက်တန်အောင်လည်း ဆုများပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်သည် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆုများကို ရယူနိုင်ဖို့အတွက် လွယ်ကူစွာ ပါဝင်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အစီအစဉ်များကို JOOX မှ ဆက်လက်၍ ဖန်တီးပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
“အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းလို JOOX က ဖျော်ဖြေရေးအပိုင်းကိုလည်း အမြဲအာရုံစိုက်သလို Community ကိုလည်း နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးနဲ့ အမြဲဂရုစိုက်ပေးလေ့ရှိတဲ့ Brand ဖြစ်ပါတယ်” ဟု JOOX Myanmar ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Mr. John Zhang က ပြောကြားခဲ့သည်။ “လူတော်တော်များများက ဒီကပ်ရောဂါဟာ နောက်တစ်ကြိမ် စတင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ပူနေကြလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားလုံးကို စိတ်သက်သာရာ ရစေချင်ပြီး ပျော်စေချင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ဘေးကင်းစွာနေထိုင်ပြီး ဒီအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ကံစမ်းရင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
JOOX သည် “Freemium” အခမဲ့ သီချင်းနားထောင်နိုင်ရသည့် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင်၊ မကာအို၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားနှင့် မြန်မာအပါအဝင် အာရှဈေးကွက်တွင် ရယူနားဆင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ JOOX ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် အသုံးပြုသူဦးရေ သန်းပေါင်း ၂၉၀ ကျော်ရှိပြီး ၁၅ ဘီလီယံ ကျော် နားဆင်လျက်ရှိသည်။ JOOX သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီမှ အသုံးပြုသူများ၏ ဂီတအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုများအလိုက် ဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့လျက်ရှိသည်။ JOOX တွင် မြန်မာ သီချင်းအားလုံးကို အခမဲ့နားဆင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အချို့သော နိုင်ငံတကာမှ သီချင်းများကိုသာလျှင် VIP Membership ဝယ်ယူ၍ နားဆင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
JOOX မှ COVID-19 နှင့် ပတ်သက်သော စိတ်ပူပန်မှုများကို ဖြေဖျောက်စေရန်အတွက် ဂီတဖျော်ဖြေရေးနှင့်အတူ လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်နေခဲ့သည်မှာ လအနည်းငယ်ခန့် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက JOOX 2020 ပထမနှစ်ဝက်ဆုပေးပွဲကို သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အတွင်း JOOX Application တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို ၁၂ ရက်အတွင်းတွင် JOOX အသုံးပြုသူများသည် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သီချင်းနှင့် တေးသံရှင်များကို ပထမနှစ်ဝက်အတွက် JOOX ၏ ဆန်ခါတင်အယောက်တစ်ရာထဲမှ မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
မကြာသေးမီက World Music Day အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် “Sounds of Happiness” ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး COVID-19 ကာလအတွင်း အိမ်မှာနေထိုင်သူများကို စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေရန်နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သတိပြုမိစေရန် ရည်ရွယ်၍ စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေသော “Stay home” playlist ကိုလည်း ဖန်တီးပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
Source – JOOX
MyTech Myanmar2020-09-11T16:56:11+06:30September 11th, 2020|Mobile Phones, News|